Madaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay taliyeyaasha ciidamada booliiska Nugaal iyo Mudug - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay taliyeyaasha ciidamada booliiska Nugaal iyo Mudug
Madaxweynaha Puntland oo isbadal ku sameeyay taliyeyaasha ciidamada booliiska Nugaal iyo Mudug
April 4, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Sawirka: Ciidamo katirsan booliiska Puntland.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isbadal ku sameeyay taliyeyaasha ciidamada booliiska ee gobolada Nugaal iyo Mudug.
Taliyaha booliiska gobolka Nugaal Muumin Cabdi Shire ayaa loo badalay gobolka Mudug, halka taliyaha booliiska Mudug Cabdulqaadir Jaamac Dirir loo soo wareejiyay Nugaal, sida lagu sheegay digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maanta oo Sabti ah.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa Cabdi Casayr Yuusuf u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska gobolka Karkaar.
Cutubyo katirsan ciidanka Daraawiishta Puntland oo tababar ugu soo gabogaboobay magaalada Qardho
Sargaal katirsan Wasaaradda Maaliyada Puntland oo si xun ugu dhaawacmay qarax ka dhacay Gaalkacyo
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s al-Shabab armed group said it had killed at least 40 Ethiopian troops after the militant stormed Ethiopian troops base in central Somalia on Thursday morning. Residents in Halgan area of central region [...]
Shiikh Yuusuf Cali Caynte oo aabe u ah wasiirka qorshaynta Soomaaliya oo ka bad-baaday qarax gaarigiisa loogu rakibay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shiikh Yuusuf Cali Caynte oo ah guddoomiyaha guddiga culumada Soomaaliyeed horeyna u soo noqday xildhibaan dowlada federaalka ah ayaa ka badbaaday isku day dil shalay galab oo Sabti ahayd kadib markii gaarigiisa loogu [...]
Soomaaliya oo kaalinta labaad kaga jirta tirada dhimashada COVID-19 ee Geeska Afrika
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada coronavirus ee Soomaaliya ayaa gaartay sideed qof, taasoo ka dhigaysa dalka labaad ee ugu dhimashada badan Geeska Afrika, sida ku cad xogta Haayada Caafimaadka Adduunka ee WHO. 49 kiis oo cusub [...]